Allah swt changeth not the condition ofafolk until they (first) change အရှင်မြတ်သည် လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်၏ အခြေအနေကို ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင် မပြောင်းလဲသမျှကာလပတ်လုံး ပြောင်းလဲတော်မူ သည် မဟုတ်ပေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The Muslims Are Coming! မွတ်စလင်မ်တွေလာနေပြီဟေ့
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ မြန်မာမွတ်စလင် ဂျီနိုဆိုက် အသိပေး ဟန့်တားရေး ညီလာခံ »
Allah swt changeth not the condition ofafolk until they (first) change အရှင်မြတ်သည် လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်၏ အခြေအနေကို ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင် မပြောင်းလဲသမျှကာလပတ်လုံး ပြောင်းလဲတော်မူ သည် မဟုတ်ပေ
13:11 Surat Ar-Ra`d (The Thunder) – سورة الرعد
အမှန်သော်ကား အရှင်မြတ်သည် လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်၏ ( ကောင်းမွန်သော ) အခြေအနေကို ၄င်းတို့ ကိုယ်တိုင် မိမိ တို့ ၏ခြေအနေကို မပြောင်းလဲသမျှကာလပတ်လုံး ပြောင်းလဲတော်မူ သည် မဟုတ်ပေ။
We should not go to the extremes….Without asking (or refusing or thinking that it is useless or NO NEED TO) doa’ from ALLAH swt…over conscious in self, became megalomaniac and think that you are capable of doing any thing is wrong.
Faw Chai ကျွန်တော် ဒီမူ ကို လက်ခံ သလို ကျင့် လဲ ကျင့်တယ်ဗျာ။။ ပြောလိုက် ယင် အလ္လာ လုပ်ပေးမယ့် ဘဲ ပြောတယ်။။ အလ္လာ ကပေးတာ မှန်တယ်။။ ဘယ်အရာ မဆို ခင် ဗျား တို့ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ အလုပ် အပေါ် မှာစိတ်ဓာတ်ပေါ် မှာ ရသင့် ရထိုက် တာ ကို ဘဲအလ္လာက ပေး မှာ။။။အလုပ်မလုပ် ဘဲ စိတ်ဓာတ်မကောင်း ဘဲချမ်း သာချင် ယင် လူ၊ လူသူတော်ကောင်ဖြစ်ချင် ယင် အလ္လာ ခင် ဗျား တို့ ဆု တောင်း တခု တည်း နဲ့ မပေး ပါဘူး။။ အဲဒီလို သာ တောင်း တိုင် ပေး ယင်၊ အလ္လာ လုပ် လိမ့် မယ် လို့ ခင် ဗျား ကိုယ်တိုင်က ထိုင်ပြီး ဆု တောင်း တာ တခု တည်း နဲ့ သာရေ သာ ခို အရှောင် လိုက်နေယင် တော့ သင့် လို လူ ကို….
ကျွန်တော်တော့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ လက်တွေ့မှာ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ ဒူဝါလုပ်တယ် ဆုတောင်းပေးတယ် ဆိုတဲ့စကားက ကျွန်တော်တို့မှာ များတယ်။ အဲဒီစကားက နှစ်သိမ့် စကားဖြစ်နေပြီး၊ အဲဒီစကားတစ်ခုနဲ့တင် လူတွေကို နှစ်သိမ့်မှု ပေးကြပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဖို့ကျ မလုပ်ဘဲ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ စကားကိုဘဲ ပြောကြတယ်။ တကယ်တမ်း နှစ်ခုလုံး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းလေးစားရတဲ့ မော်လနာ မူဇာဖောရ်အာမတ် က ကျောင်းသားတွေ သူ့ဆီလာပြီး ဒူဝါ(ဆုတောင်း) လုပ်ခိုင်းရင် ၊ သူပြောတဲ့ စကား တစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၊ မင်းတို့တွေက စာမကျက်ဘဲ ငါ့ကို ဒူဝါလုပ်ခိုင်းတိုင်း မင်းတို့ စာမေးပွဲအောင်မယ်များ မှတ်နေလား။ မင်းတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု မရှိဘဲ ဆုတောင်းတိုင်း မပြည့်စုံဘူး ဆိုပြီး အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ။
This entry was posted on October 18, 2014 at 1:50 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.